induction curing applications- induction curing ဆိုတာဘာလဲ။
induction curing ဆိုတာ ဘာလဲ။
induction curing ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင် လိုင်းပါဝါကို သမရိုးကျလျှပ်စီးကြောင်းအဖြစ် ပြောင်းလဲပြီး ကွိုင်အတွင်း လျှပ်စစ်သံလိုက်စက်ကွင်းတစ်ခု ဖန်တီးပေးသည့် အလုပ်ကွိုင်တစ်ခုသို့ ပေးပို့သည်။ ၎င်းတွင် epoxy ပါသည့်အပိုင်းသည် သတ္တု သို့မဟုတ် ကာဗွန် သို့မဟုတ် ဂရပ်ဖိုက်ကဲ့သို့သော တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဖန်ကဲ့သို့သော လျှပ်ကူးပစ္စည်းမဟုတ်သော အလွှာများတွင် epoxy ကို ကုသရန်အတွက်၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်းမဟုတ်သော ပစ္စည်းထံသို့ အပူကို လွှဲပြောင်းရန် လျှပ်စစ်လျှပ်ကူးပစ္စည်း ထိန်းကိရိယာကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
induction curing နိယာမ- သီအိုရီ
induction curing ရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေက ဘာတွေလဲ။
အပူပေးထားသော တစ်ခုတည်းသောအစိတ်အပိုင်း epoxy ကော်များသည် အရင်းအမြစ်အမျိုးမျိုးမှ အပူကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ အဖြစ်ဆုံးမှာ မီးဖိုတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း အပူလေသေနတ်များ၊ မုန့်ဖုတ်ပန်းကန်များနှင့် induction curing တို့ကိုလည်း အသုံးပြုပါသည်။ induction curing သည် epoxy ကို ကုသရန် လိုအပ်သော အချိန်ပမာဏကို များစွာ လျှော့ချနိုင်ပြီး အနီးနားရှိ အစိတ်အပိုင်းများ ပေါ်တွင် အပူသက်ရောက်မှုကို လျော့ချပေးကာ induction heating သည် ကော်ဧရိယာသို့ အပူကို အတိအကျ ပို့ဆောင်ပေးသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်၏အပလီကေးရှင်းအတွက် induction curing သည် ကောင်းသောရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသလား။
သင့်အား ပေးအပ်ခြင်း။ induction အပူပစ္စည်းကိရိယာများ ကျွမ်းကျင်သူနှင့် သင်၏ epoxy ကော်ထုတ်လုပ်သူသည် အောက်ပါအကြောင်းအရာများဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို အကောင်းဆုံးအကြံပြုချက်ပြုလုပ်ရန် ကူညီပေးပါလိမ့်မည်။
1. ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် အလွှာများကို ချည်နှောင်ထားခြင်း - ဆပ်ပြာများသည် ကပ်ခွာကို ကုသရန် လိုအပ်သော အပူနှုန်းနှင့် ပါဝါကို ဆုံးဖြတ်ရန် ကူညီပေးပါမည်။ ဥပမာအားဖြင့် သံသည် အလူမီနီယံကို အပူပေးရန်အတွက် လိုအပ်သည်ထက် ပါဝါနည်းသော အပူပေးသည်။
2. ဆက်စပ်နေသော အစိတ်အပိုင်းများ၏ အရွယ်အစား – သေးငယ်သော အစိတ်အပိုင်းများသည် ထိရောက်သော အပူပေးရန်အတွက် ကြိမ်နှုန်းပိုမိုလိုအပ်သည်။ ပိုကြီးသောနေရာများသည် ကြိမ်နှုန်းနည်းပါးခြင်းမှ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသည်။
3. Epoxy လိုအပ်ချက်များ – epoxy ကို ကုသရန်အတွက် min/max အတိုင်းအတာ ရှိပါသည်။ ကုသမှုကိုအကျိုးသက်ရောက်စေရန်အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် epoxy မပြိုကွဲမီခွင့်ပြုထားသည့်အမြင့်ဆုံးအပူချိန်။
Quartz Chip ကို သံမဏိဆလင်ဒါသို့ ချည်နှောင်ရန်အတွက် Induction Curing
မော်တော်ကားစက်မှုလုပ်ငန်းရှိ ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် အပူချိန် 175°C (347°F) သို့ရောက်ရှိနိုင်ပြီး တင်းကျပ်စွာခံနိုင်ရည်ရှိသော +/- 3C အတွင်း ထိန်းထားနိုင်သည့် induction အပူပေးစနစ်ကို ရှာဖွေနေသည်။ induction အပူ Quartz ချစ်ပ်ပြားကို တွယ်ကပ်ခြင်းအတွက် ကော်တစ်ခုအား ကုသရန်အတွက် သံမဏိဆလင်ဒါကို အပူပေးလိမ့်မည်။ Induction အပူပေးခြင်းသည် ပိုမိုမြန်ဆန်၊ ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး ပိုမိုတူညီသော အပူပေးစွမ်းနိုင်သောကြောင့် ဦးစားပေးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ပစ္စည်းကိရိယာ DW-UHF-10kW သော induction heat system လိုချင်သော အပူချိန်ကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် ထိန်းထားရန် ဤ curing application အတွက် အကြံပြုထားသည်။
ဤ induction curing application ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ 1.064" (2.70 cm) OD၊ 7.25" (18.41 cm) ရှည်သော 1" (2.54 cm) heat zone မှ 175 C (347° အထိ) စတီးဆလင်ဒါ၏ နှစ်ဖက်ကို အပူပေးရန်ဖြစ်သည်။ F) bonding application ကိုလုပ်ဆောင်ရန်အတွက် ထိုအပူချိန်ကို စက္ကန့် 60 ကြာ ဖိထားပါ။ အလိုရှိသော အပူချိန်သည် 13 စက္ကန့်အတွင်း ရောက်ရှိခဲ့သည်။ အပူချိန်တိုင်းတာရန် K-type အပူချိန်ထိန်းချုပ်ကိရိယာကို အသုံးပြုခဲ့သည်။
induction curing လုပ်ငန်းစဉ်
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ, နည်းပညာများ Tags: ကြိမ်နှုန်းမြင့်မားစွာ ကုသခြင်း။, မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းဖြင့် ကုသခြင်းစနစ်, သော induction တင်နိုင်, induction curing လျှောက်လွှာ, induction curing အပူပေးစက်, သော induction တင်နိုင်အပူ, induction curing စက်, induction curing စနစ်, induction curing ဆိုတာဘာလဲ post navigation